အဆင့် - ဤအရာများသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောမမေ့နိုင်သော X FACTOR တရားသူကြီးများဖြစ်သည် - သတင်း
အဆင့် - ဤအရာများသည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောမမေ့နိုင်သော X Factor တရားသူကြီးများဖြစ်သည်
X Factor သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီလမ်းညွှန်များကိုဝိုင်းရံထားပြီးမုန်းတီးမှုအများဆုံးဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုများသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာလုပ်နိုင်သမျှလုပ်ခဲ့ကြသည့်မရေမတွက်နိုင်သည့်နှစ်များအတွင်းတရားသူကြီးများစွာလာပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည် - လူးဝစ်ဝေါ့စ်ကိုလည်းဤအချက်အားဖြင့်အခွန်ကောက်ခံခဲ့ကြပုံရသည် ရှိမုန်သည် Beverley Hills Clinic CV ဖြစ်သကဲ့သို့ငါတို့လည်းပညာမဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့သည်သင်တို့၏လူးဝစ် Walshes, ရှိမုန် Cowells သို့မဟုတ်ပင်ရှာရုန် Osbournes အကြောင်းပြောဆိုရန်ဤနေရာတွင်မဟုတ်ပါဘူး။
Tennessee သို့မဟုတ် Virginia မှာရှိတဲ့ Bristol ဖြစ်ပါသည်
အခြားလူများနှင့်ကောင်းစွာဆက်ဆံသည့်အခါယခုဤလူတို့၌ကောင်းသောအတွေ့အကြုံမရှိသောကြောင့်ယနေ့သူတို့သည်တရားသူကြီးများအဖြစ်မည်မျှလုံးလုံးလျားလျားမေ့ပျောက်နိုင်သည့်အရာအပေါ် အခြေခံ၍ ကရုဏာကင်းမဲ့စွာအဆင့်သတ်မှတ်ခံရမည်ကိုကြေငြာခြင်းကမည်သည့်အတွက်မျှနောင်တမရပါ။ အဆိုပါ X Factor ကိုဗြိတိန်။ ပျော်
Tulisa သည်ကြမ်းတမ်းသော၊ ကြမ်းတမ်းပြီးခေါင်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် Tulisa သည်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်သွားသောဆင်းရဲသောပြိုင်ပွဲဝင်များအားသူ၏ဒုက္ခများကိုချန်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည့်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ လိုပဲ အလေးအနက်ထား ။ သို့တိုင်သူမတွင်ကောင်းမွန်သော quips အချို့ရှိပြီးတရားသူကြီးများနှင့်သူ၏အငြင်းပွားမှုများကသူမကိုအမှတ်ရစရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဤစာရင်းတွင်အလွန်မြင့်မားခဲ့သည်။
8. ဂယ်ရီ Barlow
Tulisa သွားဘယ်မှာ Gary အောက်ပါအတိုင်း, ထိုစုံတွဲဆက်ဆက်ပြပွဲအပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအချို့သောတွေဆီကနေ -ups ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသင်မှတ်မိသလား သူမကသူမသည် fag ပြာမှုန်အသက်ရှုရှိခဲ့သူမကသူမဝိုင်အနီချွတ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြန်ပစ်ခတ်ပြောကြားခဲ့သည် ? ကောင်းသောအရာဂယ်ရီလူးဝစ်ဘေးမှာထိုင်မခံခဲ့ရ - သူသည်ထိုပါးစပ်ထဲကလာမယ့်အရည်ကျိုလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့သိတယ်။
Dannii Minogue သည် X Factor ၏ရွှေခေတ်ဟုယူဆရသည့်အချိန်တွင်၊ လူများသည်၎င်းတို့အတွက်မှန်ကန်စွာဝေဖန်မစတင်ခင်အချိန်ကရောက်ရှိလာပြီးအချိန်တန်မှထွက်ခွာသွားသောတရားသူကြီးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကံကောင်းသည်။ ပြိုင်ဘက်များကိုစိတ်ဓာတ်မတည်ငြိမ်မှုအဖြစ်မဟုတ်မမှန်ရေးဆွဲခြင်း ။
သူမသူမ၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိဘဲဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ် , ဒါပေမယ့် Dannii တစ်ခုလုံးအပေါ်တရားသူကြီးအဖြစ်အကြီးအကျယ် inoffensive နှင့်သူမ၏အဆုံးစွန်သောအားနည်းချက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်စွာကြီးမားသောအမှတ်ရစရာဖြစ်သော်လည်းဤစာရင်းတွင်နံပါတ်ခုနစ်ဖြစ်ရန်လုံလောက်သည်။
က Mel B ရဲ့အတန်ငယ်ကြည့်ဖို့ရှားပါးမဟုတ်ပါဘူးနေတုန်း ချောမွေ့ ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်မျက်နှာများကိုကြည့်။ သူသည် X Factor တွင်တရားသူကြီးတစ် ဦး ဖြစ်နေသည်။ ရုံထဲမှာထည့်သွင်းမတိုင်မီစီးရီး 11 အဘို့အလှည့်ပတ်ဆွဲထား, သူမ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တိုတောင်းခြင်းနှင့်ချိုမြိန်ခဲ့ပါတယ် - ကပေးထားသောအံ့သြစရာခဲယဉ်းပေမယ့် သူမသည်သည်းခံရ၏ခဲ့အပြုအမူ ဆိုးသော Count လူးဝစ်ကနေ။
5. ကယ်လီ Rowland
Kelly Rowland သည်ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး၊ လူအများစုကသူမ 2011 ခုနှစ်ရာသီရှစ်ရက်နေ့တွင်ပေါ်လာသည်ကိုမေ့သွားလိမ့်မည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းအစားများကိုစောစီးစွာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Dannii မှလွှဲပြောင်းခြင်း Kelly သည် Tulisa နှင့် Gary တို့နှင့်အတူထိုင်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် - သင်ကပိုမိုဆိုးရွားလှသည့်တည့်သောလည်ပတ်မှုကိုဖော်ပြရန်သင့်ကိုဖိအားပေးရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
သူတို့ကနောက်ထပ်ယူကြောင်းထပ်ဆောင်းကြောင်းတစ်ခုကိုထိုဆောင်း ဦး ရာသီ X Factor panel ထဲ၌ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာသောအခါလူများစွာသည် ကောင်းသောအိုအဟောင်းကနေမာကု Owen အိုင်တီ Morrison ရဲ့ကြော်ငြာထွန်းလင်း လူဟောင်းကောင်းတစ် ဦး ကင်ပေးခြင်း။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်အမှန်အားဖြင့် 90 ကျော် badboy Robbie Williams ဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်ပြပွဲမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်။
အကယ်၍ သူတို့က Mark, Howard သို့မဟုတ် Jason တို့ကိုရောထွေးမယ်ဆိုရင် X Factor ဟာယနေ့ထိတိုင်ရှိနေ ဦး မှာပါ။
Paula Abdul သည်သင်ပြသခြင်းအတွက်သူမစောလွန်းနေသဖြင့်သို့မဟုတ်သူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်မသိသောကြောင့်သင်ပြသခြင်းကိုသင်အသိအမှတ်မပြုတော့ပါ။ ရှင်ပေါလု၏အဘယ်အရာကိုသင်အောက်မေ့သည်မည်သို့ပင်သို့သော်သို့သော်သူမကျိန်းသေသူမပြပွဲအပေါ်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာမှများအတွက်အမှတ်ရစရာမဟုတ်ပါဘူးပြောတရားမျှတပါတယ်။
Gaelic တှငျပျော်ရွှင် st စပါးရဲ့နေ့
2006 ခုနှစ်၏ရာသီသုံးရက်နေ့တွင်aည့်သည်တရားသူကြီးအဖြစ်သူမ၏အသွင်အပြင်မည်သူမဆိုရဲ့ ဦး ခေါင်း၌ကပ်သလိုပဲမထားပါဘူး။
2. Ayda ဖျော်ဖြေမှု
ကောင်းပြီကောင်းပြီယုတ်ညံ့ပြီး Ayda ကိုအကြွေးအနည်းငယ်ပေးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, X ကို Factor အပေါ်သူမ၏အသွင်အပြင်လျော့နည်းမေ့လျော့ခဲ့များနှင့်ပိုပြီးသင်လုံးဝဤအချက်အားဖြင့်စောင့်ကြည့်စွန့်လွှတ်ချင်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရောဘတ်ဝီလျံနှင့်အတူပေါ်လာသည့်အခါပထမဖြစ်ရပ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်းလူအားလုံးသည် စုပေါင်း၍ အဆက်ဖြတ်လိုက်ကြပုံရသည် 14 နှစ်အတွင်းအနိမ့်ဆုံးပစ်လွှတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ။
1. နစ်ခ် Grimshaw
နောက်ဆုံးတော့ထိပ်ဆုံးမှာထိပ်ဆုံးကနေ ၀ င်လာတာနစ်ခ်ဂရမ်ရှော့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါ တကယ် - pies အတွက်လက်ချောင်းများအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ။ ဤသူသည် X Factor တွင်တရားသူကြီးအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းအခြားဘီဘီစီအစီအစဉ်များနှင့်အတူ Radio One နံနက်စာစားပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်အတိတ်တရားသူကြီးများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သူကစဉ်းစားနေသနည်းဟုမည်သူမဆိုထင်မြင်သည့်နောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်ခြင်းမှမတားဆီးနိုင်ပါ။
Grimshaw နှင့် Robbo တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည် X Factor အတွက်ခေါင်းတလား၌သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် Cowob Cowell သည်၎င်း၏သေးငယ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မှနောက်ဆုံးကျသောနို့ရည်ကိုနို့တိုက်ရန်နည်းလမ်းရှာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ တဟဟ
• X Factor သည်လူသန်းပေါင်းများစွာ၏ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုအဖြစ်မှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်
သငျသညျ meme အတွက်သို့မဟုတ်အထဲကများမှာ
• The X Factor တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအမှန်တကယ်ရူးသွပ်သောအရာ ၆၄ ခု